Anaphylaxis (ပြင်းထန်သောဓါတ်မတည့်မှု) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Anaphylaxis (ပြင်းထန်သောဓါတ်မတည့်မှု)
Anaphylaxis လို့ခေါ်တဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အသက်အန္တရာယ်ပင်ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ သင်နဲ့ဓါတ်မတည့်သောအရာ ဥပမာ- မြေပဲ၊ ပျားအဆိပ် တို့ကို မိနစ်ပိုင်း သို့ စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ထိမိရုံနဲ့တင် ဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်နိုင်တယ်။
ပြင်းထန်တဲ့ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိသူတွေဟာ နောက်ထပ်နောက်ထပ် တုံ့ပြန်မှုတွေရနိုင်ချေများပါတယ်။ ပထမတုံ့ပြန်မှုက အားနည်းသည်ဆိုစေကာမူ နောက်ထပ်တုံ့ပြန်မှုတွေက ပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်ပါတယ်။ ပြင်းထန်ဓါတ်မတည့်ခြင်းရပါက ချက်ခြင်းအရေးပေါ်ဌာနသို့သွုားသင့်ပြီး ပြင်းထန်ဓါတ်မတည့်ခြင်းဟာ မကုသပါက အသက်ရှူရပ်ကာ နှလုံးရပ်သည်ထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပြင်းထန်ဓါတ်မတည့်မှုကိုနားလည်ထားပြီး ထိုသို့ဓါတ်မတည့်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အရာတွေကိုသိထားခြင်းက သင့်အခြေအနေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲသိအောင် ကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အလွန်ကိုဖြစ်တတ်ပြီး အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်တယ်။ ဓါတ်မတည့်ခြင်းဖြစ်စေသော အခြေအနေများကိုရှောင်ခြင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အသေးစိတ်အချက်တွေအတွက်တော့ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်နိုင်တယ်။
ဖော်ပြသောလက္ခဏာတွေအပြင် နောက်ထပ်ရှိနိုင်သေးတာကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ပဋိပစ္စည်းဆိုတာ သင့်ခန္ဓါကိုယ်ကို ဘတ်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်တို့လို ပြင်ပအရာတွေဆီမှ ကာကွယ်ပေးတဲ့အကာအကွယ်တွေဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့လူတွေရဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်က တချို့အရာတွေကိုလိုတာထက်ပိုပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ရာမှ ဓါတ်မတည့်ခြင်းေတွေဖြစ်လာရတယ် (မြေပဲ၊ ပျားတုပ်ရာမှအဆိပ်)။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ဓါတ်မတည်ခြင်း တုံ့ပြန်မှုတွေက အသက်အန္တရာယ်မထိခိုက်တတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြင်းထန်တဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုရှိတဲ့လူတွေကတော့ anaphylaxis ပြင်းထန်တဲ့ဓါတ်မတည့်ခြင်းတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့ ပြင်းထန်တဲ့ဓါတ်မတည့်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာ သင့်ခန္ဓါကိုယ်မှာ ကယ်မီကမ်ပစ္စည်းအများအပြား ထွက်လာပြီး ရှော့ရခြင်း၊ သွေးပေါင်ရုတ်တရတ်ကျခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကျဉ်းခြင်း၊ ပုံမှန်အသက်ရှူခြင်းကိုပိတ်ဆိုးခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
ပျား၊ နကျယ်ကောင်၊ ပါးဆုပ်ပနီကောင် ကဲ့သို့အင်းဆက်ဆူးများ
အက်ပရင်၊ အိုင်ဗျူပရိုဖန်၊ ကဲ့သို့သောက်ဆေးများ
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကြောင့် ပြင်းထန်ဓါတ်မတည့်ခြင်းတွေက အဖြစ်နည်းသလို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လည်းမတူပါဘူး။ လူတချို့မှာ ဖွဖွပြေးခြင်းလိုမျိုး အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေက ထိုသို့ပြင်းထန်ဓါတ်မတည့်မှုမျိုးဖြစ်စေတတ်ပေမယ့် တချို့မှာကျ လမ်းလျှောက်ခြင်းလို သိပ်မပြင်းတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကတောင် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင် တစ်ခုခုစားခြင်း သို့ ပူလွန်း၊ အေးလွန်း၊ စိုထိုင်းလွန်းသော ရာသီဥတုတွင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်။ ဒါကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါ မည်သည်တို့ကိုသတိထားသင့်တယ်ဆိုတာ သင့်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
ဘာကြောင့်ပြင်းထန်ဓါတ်မတည့်ရသည်မသိရင်တော့ အကြောင်းသိရဖို့အတွက် ဆရာဝန်မှစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ တခါတလေအကြောင်းမသိတာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ အကြောင်းမဲ့ပြင်းထန်ဓါတ်မတည့်ခြင်းလို့ခေါ်ကြတယ်။
မိသားစုမှာရာဇဝင်ရှိခြင်း၊ မိသားစုတစ်ယောက်ယောက်က လေ့ကျင့်ခန်းကြောင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းဖြစ်ဖူးပါက တခြားလူတွေထက်ပိုပြီး ဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။
ဓါတ်မတည့်ခြင်းများ ရင်ကြပ်ခြင်းများရှိပါကလည်း ပြင်းထန်ဓါတ်မတည့်ခြင်းဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။
ဆရာဝန်ကခံစားရတဲ့ဓါတ်မတည့်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာတွေ၊ အရင်ကခံစားခဲ့ဖူးတဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်းတွေအကြောင်းမေးမြန်းပါလိမ့်မယ်။ အရေပြားစစ်ဆေးမှုတွေ၊ သွေးစစ်ဆေးမှုတွေလည်း လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်လက္ခဏာတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့ တခြားအချက်တွေလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။
နီရဲယားယံအကွက်များပေါ်ခြင်းကဲ့သို့ အရေပြားပြဿနာတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်းမဟုတ်တဲံ တခြားအကြောင်းအရာများ
ပြင်းထန်ဓါတ်မတည့်ခြင်းမှာ အသက်ရှူရပ်ခြင်း သို့ နှလုံးခုန်ရပ်သွားပါက အရေးပေါ်ကုသသူများမှ CPR နည်း (အရေးပေါ်အသက်ကယ်နည်း)လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ကုသမှုတွေကတော့-
အသက်ရှူလမ်းကြောင်ရောင်ရမ်းမှုကိုလျှော့ချပြီး အသက်ရှူခြင်းကိုအကူအညီဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက် antihistamine , cortisone အကြောဆေး
အသက်ရှူခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေအတွက် albuterol ကဲ့သို့ဆေးများ
မိသားစုနဲ့ သူငယ်ချင်းများကိုပြောပြပါ။ မိသားစုတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေက သင့်အခြေအနေ၊ ဘာနဲ့မတည့်သလဲ၊ ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေခံစားရတတ်သလဲ ကိုသိထားသင့်ပါတယ်။
တချို့သောဆေးများ၊ အရာများကို ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိပါက အသိပေးတဲ့ လည်ဆွဲ သို့ လက်ပတ်ဝတ်ထားပါ။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ နိုဝင်ဘာ 25, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စက်တင်ဘာ 17, 2019
Anaphylaxis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/anaphylaxis/basics/treatment/con-20014324. Accessed September 25, 2016.
Anaphylaxis. http://www.webmd.com/allergies/anaphylaxis-allergies. Accessed September 25, 2016.